Home Wararka Dhaawaca Saney Cabdulle oo loo diiday Dowladda Federaalka
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo ka tirsan ciidamada Milateriga Soomaaliya, odayaal dhaqan iyo siyaasiin, waxaa dowladda Soomaaliya loo diiday in ay qaaddo dhaawaca Korneel Saneey Cabdulle oo shalay ku dhaawacmay qarax ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe.
Xogta aan helnay ayaa tilmaameysa in xubno kamid ah ehellada Korneelka ay shalay taliyaha xoogga dalka ka diideen in diyaarad gaar ah oo Helicopter ah, isla markaana ay dirtay dowladda Soomaaliya lagu soo qaado kadibna la dhigo Isbitaal Digfeer ee magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in ugu dambeyn shalay subax la soo qaaday balse la dhigay gurigiisa, waxaana la jooga dhaqaatiir gaar ah oo u badan xigtadiisa, iyadoo sidoo kale ay wararku sheegayaan in uu dhaawaciisa fududyahay.
“Dowlad uma baahno Korneelka ehelkiisa ayaa ku filan oo daaween kara, dhawaanna waa la qaadi doonaa inta ka horreysana gurigiisa ayaa lagu dabiibayaa,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada Korneel Saneey Cabdulle oo la hadlay MOL.
Previous article[Akhriso] Rooble oo magacaabay Guddiga Doorashooyinka 2021
Next articleAfduubka Soomaalida ku nool Kenya oo sii kordhaya iyo walaac la soo darsay Soomaalida